Sawirro: Arday ka gashay kaalimaha hore Imtixaankii Dugsiga dhexe ee Bakool oo la abaalmariyay | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Sawirro: Arday ka gashay kaalimaha hore Imtixaankii Dugsiga dhexe ee Bakool oo...
Sawirro: Arday ka gashay kaalimaha hore Imtixaankii Dugsiga dhexe ee Bakool oo la abaalmariyay
Xildhibaanno ka tirsan dowlad goboleedka Koofur galbeed iyo maamulka gobolka Bakool ayaa ka qeyb galay xaflad lagu dhiirri galinayay 10-ka arday ee ugu sarreysa natiijada imtixaanka fasalka 8 -aad ee dugsiga dhexe, kaas oo ay qaaday wasaaradda waxbarashada Koofur galbeed.
Munaasabadda oo lagu qabtay magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ayaa waxaa lagu boggaadiyay guusha 10-ka arday ay ka gareen imtixaanka iyo dadaalladii ay muujiyeen.
Qaar kamid ah 10-ka arday ee ugu sareeyay natiijada imtixaanka dugsiga dhexe ee Koofur galbeed oo ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay in ay ku faraxsanyihiin guusha ay soo hooyeen.
Guddoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi oo ugu hambalyeeyay ardayda guusha ay gaareen ayaa bulshada faray in wacyigelin laga sameeyo meelaha aan waxbarashadu ka jirin, si loo fahmo qiimaha waxbarashada.
Munaasabadda ayaa waxaa goobjoog ka ahaa Wasiirro,xildhibaanno,maamulka gobolka,golaha deegaanka degmada Xudur,waalidiin iyo marti sharaf kale waxaana ugu dambeyn shahaado sharaf la guddoonsiiyay qaar kamid ah ardayda.
Maqaal horeSidee warbaahinta casriga ah u saameysay dhaqanka Soomaalida?
Maqaal XigaCiidamada Koonfur Galbeed oo dhaq-dhaqaaqyo ka wada Deynuunaay